Shiinaha GS Hot Slip Polyolefin Shrink Warshad Filin iyo soosaarayaasha | GS PACK
Filimka 'G SHot Slip Slip Polyolefin Shrink Film' wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka wanaagsan ee filimkeenna P OF ee hoos u dhaca heerka caadiga ah, dhanka kale wuxuu leeyahay sifooyin sibiibix ah oo wanaagsan. Kuwaas oo inta badan loo isticmaali jiray in lagu xaliyo dhibaatada ka timaadda heerkulka bidix ka dib markii kululaado lagu buuxiyo dusha sare ee filimka caadiga ah inta lagu gudajiro geeddi-socodka xirxirka adag.
Filimka 'G SHot Slip Slip Polyolefin Shrink Film' wuxuu leeyahay dhammaan sifooyinka wanaagsan ee filimkeenna P OF ee hoos u dhaca heerka caadiga ah, dhanka kale wuxuu leeyahay sifooyin sibiibix ah oo wanaagsan. Kaas oo inta badan loo isticmaali jiray in lagu xaliyo mashaakilka ka dhashay heerkulka bidix kadib markii kululaado lagu buuxiyo dusha sare ee filimka caadiga ah inta lagu gudajiro nidaamka xirxirida adag. Xanuun ayaa lagahelaa InGS mic 12 micron, 15 micron, 19 micro n, 25 micro n, 30 micron.
Shayga Cutub Habka Imtixaanka Guryaha Jirka
Dhumucdiisuna micron ASTM-D 374 12um 15um 19um 25um
Cufnaanta g / cm3 ASTM-D 1505 0.92 0.92 0.92 0.92
Yaraynta Bilaashka ah MD %
Dheeraynta MD % ASTM-D 882
Awoodda siligga MD N / mm2 ASTM-D 882
Iska caabin ilmada MD N ASTM-D 1938
Xoog Khatimidii N / 15mm Q BT 23-58 10 11 13 15
Dhaqdhaqaaqa ASTM-D 1894 0.23 0.19 0.18 0.19
Ma guurto ah 0.24 0.20 0.19 0.20
Ballaca Gudaha Inji 3 3 3 3
Faallooyin ： MD (Jihada mashiinka) D TD (jihada Aayadda Tran)
Iska yaree filimka (POF) waa nooc ka mid ah lakabyo badan oo wada-wadaag ah oo wax-u-qabashada bey'adda u dhow-dhow deegaanka. Filimka soo yaraaday wuxuu qaatay farsamada laba-xumbo farsamaynta, oo leh cufnaan hoose oo polyetylen (LLDPE) oo ah maaddada lakabka dhexe, iyo polypropylene-ka ternary-ka ternary-ka ee ah lakabka gudaha iyo dibedda. Maaddada waxaa lagu sameeyaa seddex lakab oo isku-xoqan ah. POF waxay leedahay astaamaha cajiibka ah ee daahfurnaanta sare, heerka hoos u dhaca sarreeya, iyo waxqabadka kuleylka-shaabadda wanaagsan. Waxay kaloo leedahay faa iidooyinka iyo faa iidooyinka filimka polyetylenka iyo filimka polypropylene, sidaa darteed waxqabadka alaabtoodu waa ka durugsanyihiin Beyond polypropylene kaliya.
Filimka Vinyl iyo filimka polyetylen-ka ayaa si ballaaran kor loogu qaaday oo looga dabaqay suuqa caalamiga ah. Faa'iidooyinka filimka POF waa: yaraanshaha sare, dhalaalka sare, hufnaanta sare, waxqabadka wanaagsan ee alaabta, dabacsanaanta wanaagsan, heerkulka hooseeya ee aan la bilaabin, ma sahlana da'da, cufnaanta wax soo saarka oo hooseeya, oo si wax ku ool ah u yareyn kara kharashka baakadaha;
Waxqabadka qufulka kuleylka ee heer sare ah, xoogga xirashada sare, iska caabbinta ilmada wanaagsan, iska caabbinta daloolka, kala duwanaanta dalabyada, oo ku habboon semi-otomaatigga, qalabka baakadaha xawaaraha sare leh oo otomaatig ah iyo baakadaha gacanta; badeecaddu waxay la egtahay heerarka FDA, sunta aan sunta lahayn, bey'adda ku habboon, waxaana loo isticmaali karaa cuntada Soo-saaridda Baakadaha ee alaabooyin kala duwan sida daawooyinka POF waxaa inta badan loo isticmaalaa baakadaha shaaha caanaha, baastada deg dega ah, baastada la qalajiyey, buugaagta, farshaxanka, waxyaabaha maalinlaha loo baahan yahay, iwm.
Hore: GS Soft & Heerkulka Hoose P OF Shrink Film
Xiga: GS Super 10 Micron Polyolefin Shrink Film
Nadiifi Filimaanta Shrink Polyolefin
Polyolefin Heat Shrink Duubka Filimka
Polyolefin Caaga Nusqaamiya Filimka
Filimka Duubista ee Polyolefin
Soo-saareyaasha Baakadaha Waxyaabaha Transparent Pla ...
Soosaarayaasha warqada kulul ee polyolefin yaraanaya ...
Custom 10-35 microns pof caag eco-saaxiibtinimo ...
Midab hufan 23 Micron LLDPE Stretch Film ...
Duubista Polyolefin Pof, Iskudhin Duubista Filimada, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Polyolefin Pof Shrink Film, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Yaree Filimka PCv,